qolka wasmada arooska iyo aroosada - iftineducation.com
qolka wasmada arooska iyo aroosada
aadan21 / December 8, 2016
iftineducation.com – xiliyada ugu macaan in galmo la sameeyo waxa waaye waqtiga qaboobaha ama barafka da aayo, hadaad xiligaas lamaantaada galma la sameyso waa humaan waxaad gaareysaan macaansiga galmada labadiina.
Galmada xiliga qabowga jiro ayaa laga qaada qandac maxaa yeelay labada lamaane jirkooda waa qandac oo ayagaa ayaa is qandacsanaayo,
meeshaasna labada lamaane waxay ka helaayan macaansi galmo oo sifiican ayaad isugu dhageysaan adiga iyo lamaanahaaga
GAlmada ugu macaan xiliga barafka da’aayo siiba yurub iyo amerika waxay ugu jecel yihiin lamaanaha is qaba ineey galmada sameeyaan waqtiyada barafka da aayo
somalina hori ayay ugu maah maahday xiliga roobka da’aayo ee qabowga jiro lug naageed haay ama lag haay oo loola jeedo hilib la cuno.
meeshaan ayaad ka garan kartaa galmada ugu macaan ineey tahay galmada la sameeyo xiliga qabowga jiro roobka barafka leh siiba.
Aqriso: sida lagu garto dumarka jecel galmada
halkaan ayaan ku soo koobeynaa aqriste mowduuceena galmada ugu macaan ee qaboobaha xiliga uu soo dhaco (Aadan yo).
Dumarku waa biyo baxaan balse biyo baxa dag daga ah ee dumarka ayaa ah ayaa ah in Biyo jilicsan oo cadaan xigeen ah ay ka yimaadaan kuwaasi oo marka ay soobaxyaan an lahayn wax dreen raaxa ah.
Dumarka qaar xiliga biyahaasi kaadi caadi ah ayaa timaada.
Maxaa keena Biya baxaas dag daga ah? Waxaa sababa halka Looyaqaano dhibicda G oo ah meesha ay dareenka ka qaataan dumarka ayaa qanjiro ku yaala ay cadaadismaan kadibna waxaa soo daadanaya dhacaankaasi.
Dumarka oo dhan Arintaan maleeyihiin ah in ay horay ka biyo baxaan? Jawaabta ayaa noqoneysa haa sida ay muujiyeen daraasado caafimaad ah oo lasameeyay ayaa sheegay in dumarka oo dhan ay biyo baxa dag daga ah leeyihiin balse waxaa intaasi ay ku dareen daraasadahaasi in inta badan dumarku ay gudaha u biyabaxaan oo aysan banaanka u soo bixin xiligaasi qaarkamid ah dumarku kaadi ayeey dareemaan.
sidee ugu macaan wasmada talo cusub
Daawo wiil iyo gabar soomaali ah oo isku soo gudbiya Video-ga snapchat xubnahooda Taranka